Injabulo kuZinnbauer kubuya onozinti kwiBucs - Impempe
Injabulo kuZinnbauer kubuya onozinti kwiBucs
Amathunzi ayewukela kwi-Orlando Pirates njengoba isixazululekile inkinga yonozinti ebibebhekene nayo. Leli qembu like lasala noWayne Sandilands yedwa kulandela ukulimala koRichard Ofori noSiyabonga Mpontshanene emavikini ambalwa edlule.
Kwayena uSandilands ubeziqinisa nje kwazise ubengaluleme kahle kokwakhe ukulimala. Kodwa umqeqeshi, uJosef Zinnbauer uthe bazobe sebekhona bobabili o-Ofori noMpontshane uma sebebhekene neRaja Casablanca kwiCAF Comnfederation Cup ngeSonto.
“Bekuyinkinga (njengoba bekulimele u-Ofori noMpontshane), kodwa bazobe sebebuyile bobabili ngeSonto. Sizobheka ukuthi ubani ongcono kakhuhdlwana kubona,” kusho uZinnbauer ngoLwesihlanu.
“Kubadlali abalimele, asinaso njengamanje isiqiniseko sokuthi sibaphi abazobe sebebuyile. Cishe uHappy Jele uyabuya, noThabang Monare noma uThembinkosi Lorch.
“Sizosebenzela phezu kwalokho, sesibalinde eside isikhathi laba badlali. Ngethemba ukuthi sizokwazi kusasa (ngoMgqibelo) ukuthi siyabathola yini.
“UTerrence Dzvukamanja yena akekho, kodwa ngethemba ukuthi uBongani Sam uyabuya. NoGabadinho Mhango useluleme ngokugcwele. Ngethemba ukuthi sizoba nabo bonke bese sikwazi ukuzithela esizobasebenzisa ukuqala umdlalo,” kusho uZinnbauer.
IPirates isethubeni elihle lokuzibekisela indawo emzuliswaneni olandelayo kwiConfederation Cup njengoba iqala ekhaya. IRaja akuyona imbangi elulafuthi iBucs kuzomele izibambe ziqine kulo mdlalo wasekhaya ukuze ikwazi ukuhamba nomphumela omohle uma seyisa emlenzeni wesibili ekuhambeni.
Previous Previous post: Iyakhula iPhantane esinabela ezweni lonke
Next Next post: Kuzoguga utshani kuqhuthulana izimbangi ezindala